म सिस्को I-पुरस्कार फाइनलिस्ट हुँ - कृपया हाम्रो विचार समर्थन गर्नुहोस् Martech Zone
म सिस्को I-पुरस्कार फाइनलिस्ट हुँ - कृपया हाम्रो विचारलाई समर्थन गर्नुहोस्
शुक्रबार, अप्रिल 4, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो प्रायः यस्तो अवसरमा आउँदैन - $ २,250,000,००० जित्ने मौका र यस्तो कम्पनीसँग काम गर्ने सिस्को तपाईंको विचारलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न!
तपाईंले पढ्नु अघि, हामी तपाईंको समर्थन प्रयोग गर्न सक्दछौं। यद्यपि हाम्रो एप्लिकेसनले यो फाइनलमा पुर्‍यायो, हामी भोटहरूमा एकदमै उज्यालो देख्दैछौं। यदि मतदान अझै खुला छ भने, हामी तपाईलाई धन्यबाद दिन्छौं यदि तपाईले हामीलाई दर्ता गर्नुभयो र हामीलाई मतदान गर्नुहुनेछ:
सिस्कोको I- पुरस्कार वेब साइटको लागि दर्ता गर्नुहोस्
सास POS विचारमा लगइन गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् "प्रमोट गर्नुहोस्"।
I-पुरस्कार के हो?
को लागी क्लिक गर्नुहोस् सिस्को I- पुरस्कार भिडियो
म रेस्टुराँ उद्योगमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको छु भनेर महसुस गर्न पाउनु भयो कि रेस्टोररर्सले सामना गर्ने प्रमुख मुद्दाहरू मध्ये एक हो सजीलो र सस्तोमा टेक्नोलोजीहरू फेला पार्ने र अपनाउने क्षमता। सत्य भन्नु हुन्छ, उद्योग पुरानो हो ... बिक्री प्रणालीहरूको पोइन्टले कम्पनीहरूको सुरुआत लागतको १०% भन्दा बढी खर्च गर्नेछ र प्रणालीहरूको क्षमताहरू गम्भीर रूपमा सीमित छन्।
मैले हाल काम गरिरहेको कम्पनी POS प्रणालीसँग अनलाइन अर्डरिंग एकीकृत गर्न अग्रणी रहेको छ। यद्यपि यो एक अविश्वसनीय चुनौती हो। POS प्रणालीहरू, कम से कम, टेक्नोलोजीमा एक दशक पछाडि र वेब मार्फत ईकामर्सका लागि पूर्ण रूपमा तयार नरहेका छन्। तिनीहरूको प्रणाली अनलाइन एकीकरणमा खोल्नुको सट्टा, पीओएस कम्पनीहरूले अब अविश्वसनीय र अपूर्ण सुविधाहरूसहित थप इजाजतपत्र लागत आवश्यक पर्दछ, जसले म जस्तो कम्पनीहरूको लागि र साथै रिस्टोररको लागि वास्तविक दुखाइ पैदा गर्दछ।
अफिस अनुप्रयोगहरू, ईमेल अनुप्रयोगहरू र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रणालीहरू सफ्टवेयरमा सेवाको रूपमा सारिएका छन्, पीओएस प्रणालीहरू भएको छैन र यो अहिलेको अवसर हो कि धेरै कम्पनीहरूले होस्ट गरिएको समाधानहरू अपनाउने क्रममा डुब्न लागेका छन्। दिमागमा यो साथ, मैले सिस्कोको वेबसाइटमा मेरो विचार पोस्ट गर्‍यो SaaS POS। विचार वर्तमान POS सफ्टवेयर लिनु हो र POS हार्डवेयरबाट भन्दा इन्टरनेटबाट चलाउनु हो।
फाइदाहरू धेरै छन् - अनलाईन अर्डरिंगको साथ एकीकरण निर्बाध हुन्छ। साथै, नयाँ अवसरहरू देखा पर्दछ, जस्तै पेरोल, बैंकि,, ईमेल मार्केटि integ एकीकरण, मोबाइल एकीकरण, र उत्पादन आपूर्ति (सामन बाहिर चलान एक प्रबन्धक अधिक अर्डर गर्न सोधेर एक चेतावनी पैदा गर्दछ। उहाँ अनुमोदन गर्नुहुन्छ र अर्डर इलेक्ट्रोनिक पठाइन्छ)।
सिस्कोले हामीलाई वास्तवमै यहाँ एउटा अविश्वसनीय अवसर प्रदान गरेको छ र म यो विचारलाई उपयोगी भएको हेर्न चाहन्छु। म विश्वास गर्दिनँ कि त्यहाँ अधिक उपयुक्त कम्पनी छ जसले बजारमा यस किसिमको विचार बिकास गर्न र सहयोग पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउँछ। नेटवर्क पूर्वाधार आवश्यक छ, सुरक्षा, पातलो ग्राहक टेक्नोलोजी ... यी सबै सिस्कोको शक्ति हुन्!
ध्यान दिएर हेर्नु सिस्को I- पुरस्कार को ब्लग थप विवरणहरूको लागि।
र हाम्रो विचार प्रचार गर्न नबिर्सनुहोस् !!! टोलीले मसँग बिल डसन, कार्ला Ybarra-डॉसन र जेसन कार.
टैग: सिस्कोसिस्को I-पुरस्कारसिस्को iprize
Knotice लिनुहोस्! मार्केटिंग टेक्नोलोजी ग्यासहरू ब्रिज गर्दै
अप्रिल 4, 2008 मा 6: 25 PM
मैले प्रमोटमा क्लिक गरेको छु! आशा छ कि यसले काम गर्छ।
अप्रिल 4, 2008 मा 6: 38 PM
तपाइँको समर्थन को लागी धेरै धन्यवाद, शान! मलाई लाग्छ कि हामीले ल्यान्डस्केप परिवर्तन गर्ने धेरै अवसरको साथ एक यथार्थवादी अनुप्रयोग पाएका छौं। हामीले न्यायाधीशहरूको बाहिर धेरै ध्यान पाएनौं जस्तो देखिन्थ्यो, यद्यपि म केही मतहरू खोज्दै छु।
हामी तपाईलाई धन्यबाद दिन्छौं!
अप्रिल 5, 2008 मा 8: 55 एएम
मैले अन्तिम १० मिनेट त्यो साइटमा एक खाता बनाउने प्रयास गरेकोमा तपाईंलाई मतदान गरें। एकचोटि मैले पासवर्डको लागि पागल आवश्यकताहरू पूरा गरेपछि, म सबमिट गर्न खोज्दा मैले एएसपी त्रुटि स्क्रीनहरू प्राप्त गरिरहें।
म पछि पुन: प्रयास गर्नेछु र आशा गर्दछु! माफ गर्नुहोस्!
अप्रिल 5, 2008 मा 9: 13 एएम
म पनि विचार उत्कृष्ट छ लाग्छ। इन्टुटेले लेखा सफ्टवेयरको साथ केहि वर्ष पहिले यो कार्य गर्‍यो र यो रेस्टुरेन्टहरूको लागि उत्तम उपकरण हो।
दुर्भाग्यवस, मलाई लाग्दैन कि तपाईं यस्तो अवधारणाको प्रमोट गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ कम्पनीका केही जोडी अहिले अवधारणामा काम गरिरहेछन्। म, तथापि, तपाईंलाई भोट दिनेछु। सिस्कोको शक्ति र श्रोतहरू सम्मिलित सबै POS रेस्टुरेन्ट प्रणालीहरू भन्दा बढी!
अप्रिल 5, 2008 मा 11: 05 एएम
केहि यस्तो आवाज छ कि अझै ग्राहक ग्राहकको विशेष कार्य चाहिन्छ, हुनसक्छ Adobe AIR प्रयोग गर्दै? वा त्यो पर्याप्त सिस्को-ईश पर्याप्त छैन?
अप्रिल 5, 2008 मा 11: 16 एएम
माईक - तपाईं सहि हुनुहुन्छ, एक स्थानीय डाटा स्टोर कनेक्टिभिटी तल गए घटनामा आवश्यक हुन्थ्यो। आकाशवाणी वास्तवमा यो पक्का हो कि होइन यो निर्णय गर्नको लागि प्रेरणा हो। आकाशवाणीले चाल पक्कै गर्न सक्छ, तर यदि सिस्कोले पातलो ग्राहक विकास गरेको भए, त्यसले सायद यो पनि राम्रोसँग कार्य गर्दछ!
अप्रिल 6, 2008 मा 3: 42 एएम
यो महान हो - शुभकामना। जब तपाईं जित्नुहुन्छ, म मेरो साइटको लागि अन्तर्वार्ता चाहन्छु 😉